Zirconia Opaqueness & Shade mbipụta mgbe Sintering-News-VSmile Co., ltd
Zirconia Opaqueness & Shade mbipụta mgbe Sintering
Oge: 2021-04-13 ikwu:35
Anyị anatala ọtụtụ ajụjụ banyere nsị site na ụlọ nyocha dị iche iche n'ime afọ ole na ole gara aga, ugbu a anyị chọrọ ịmepụta eri ebe ajụjụ na azịza niile a nwere ike ịdị n'otu ebe, iji mee ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịchọ mgbe e mesịrị. Yabụ ajụjụ ọ bụla ị nwere maka ịgbagha nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na Vsmile ga - enyere gị aka ịpụ.
Opaque na onwu-anya mgbe sintering?
Dị ka anyị niile mara, na translucency nke zirconia metụtara na ego na ụdị nke mgbakwunye, na sintering okpomọkụ, ọnọdụ ikuku n'oge sintering usoro, na kpo oku ụzọ. Karịsịa, okpomọkụ ikpeazụ nke usoro nsị na usoro kpo oku eji eme ihe bụ ihe na-egosi njupụta, porosity, na ọka ọka nke zirconia. Mgbanwe na ọnọdụ nsị ga-agbanwe ntụgharị nke isi nke zirconia.
Ezigbo mmetụ ahụ adịghị eru okpomọkụ achọrọ, na zirconia na- echekwa - Otu nsogbu anyị achọtala, ọtụtụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-asọfe karịa oge. Ya mere, 1450 afọ gara aga nwere ike ịbụ 1550 ugbu a. Calibrate ọ bụla 3-6 ọnwa n'agbanyeghị ọkụ ika. Ọ bụrụ n’ịchọta na ikuku na-apụ ihe karịrị ogo iri abụọ na ise, kpọọ ọtụtụ mgbeo nwalee sintering oku okpomọkụ ọ bụla 3 ọnwa ka ọkara otu afọ, nke ahụ ga-adị mkpa.
Na-efu efu dna-eri ihe nhazi na ihe ngwọta mmiri mgbe ị rụsịrị mmiri, a ga-emetọkwa ọkụ ahụ mgbe ịmịchara ma kpochaa n'emeghị ka akpọnwụ - hichaa oku, break n'efu zirconia(ọcha zirconia diski-HT ST UT) n'ime obere iberibe size 5-10mm. Were mpempe 4-6 ma debe ha na tray na-eme mmehie (na mkpọpu), kpuchie ndochi, were ọzọ Mpekere 8-10 ma tinye ha na shei ahụ, tinye efere sintering n'etiti ọkụ ahụ.
Usoro ngbanwe: ime ụlọ - --- 10 ℃ / min ọnụego kpo oku-kpo oku na 1600 ℃ - na-ekpo ọkụ ruo awa abụọ - ikuku jụrụ oyi. Na-ere ọkụ ugboro ugboro ruo mgbe zirconium ọcha nwere agba agba nkịtị, ọkụ ahụ dịkwa dị ọcha.
Yị ga-enweta zirconia zuru oke site na ịdebe ndụmọdụ ndị a:
Green ogbo ihicha na njikwa bụ otu ihe ahụ (ikuku, ahịhịa, uwe)
Jiri otu agba ahụ maka mmiri maka otu ọrụ (ZZ Acid gbakwasara)
Brọsh bụ metal n'efu
Ziri ezi dna-eri ihe nhazi
Make sure na Ihe na-ekpo ọkụ na thermocouples nke oku gbanwere tupu ịkụ awa ndị akwadoro
Chaplet gbanwere kwa izu ọ bụla
Ọ dịghị ọhụrụ sintering trays, ọ dịghị oge ochie
Sintering mmemme na-emeputa na-atụ aro
Ọkụ na-eche na ihe dị mma (enweghị njehie, enweghị mgbanwe ugbu a, ndekọ na-adị mma)
Ajuju ndi ozo puru iche gi banyere imehie:
Ihe Yttria ọ na-agbanwe oge nke zirconia ka ọ dị njọ ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ dị elu?
Yttria bụ onye na-esetịpụ ihe dịka zirconia n'onwe ya bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe. Na-agbakwunye iche iche nke Yttria na-agbanwe ihe onwunwe nke zirconia ntụgharị. Enwere ike imetụta translucency site na mgbakwunye nke obere Yttria. N'ikwu ya na ọdịnaya Yttria adịghị agbanwe oge iji dozie ụdị Tetrahedral nke zirconia.
Kedu ihe ị nwere ike iji mee ka zirconia dị jụụ?
Otu ihe atụ aro bụ ka ị dị jụụ 8-10 Celsius kwa nkeji ruo opekata mpe Celsius 450 Celsius wee bụrụ ihe dị jụụ na ime ụlọ.
Ọ na-ewelite / iweda nsụda okpomọkụ ahụ etu zi sị dị?
Ọ bụrụ otu a, gịnị na-eme ma a chụọ gị n'ọrụ nke ukwuu? Odi elu?
Azịza: Ee ọ na-agbanwe Aesthetics nke zirconia n'ụzọ buru ibu. ya niile na-adabere na ihu igwe na ọ bụ elu fusing zirconia, obere fusing zirconia, cubic zirconia, tetrahedral zirconia ma ọ bụ ọbụna shaded zirconia. Sintering Jide Okpomọkụ na-ekere òkè dị ukwuu banyere otú njedebe ikpeazụ nke ngwaahịa ahụ ga-esi pụta.
Typically ma ọ bụrụ na ị na oku na zirconia na ala nke a okpomọkụ na agba ga-abụ ziri ezi na ọ ga-abụ a nzu nwụrụ anwụ anya. Ọ bụrụ na a chụọ ya na elu Dabere na elu ọ ga - esi pụta milky ma ọ bụ bulie translucency nke zirconia. Ọmụmaatụ: ọ bụrụ na ị chụọ n'ọrụ a okpueze na 1540DegC na chọrọ ọzọ translucency na bumped ya ruo 1550DegC ị nwere ike nweta ihe translucency ma ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma n'elu nkwanye nke na zirconia ọ ga-apụta nsonaazụ kacha mma.
Oge nsị na-adabere n'ọkụ ma ọ bụ akara nke Zr?
Ọ bụrụ na oge dabere na ngwongwo nke ihe, onye na-enye Zr ngwa ngwa?
Ma, ọ dabere na nsonaazụ achọrọ.
Onye ọ bụla zirconia nwere ya onye nrụpụta akwadoro maka mmemme (na-abụkarị usoro ọkọlọtọ yana mmemme ọsọ). Ma ọ bụrụ na ha nwere ite ọkụ dị iche iche, ha nwere ike ịnwe mmemme dị iche iche dabere na zirconia na teknụzụ ọkụ. M na-akwado na gị na onye na-emepụta zirconia na-ekwurịta okwu ka ị nweta sistemụ arụmọrụ ha kwadoro, ebe ha maara ọrụ a. Ka ị na-apụ na mpụga nke ndị a, ihe anaghị abụ amụma.
Fast sintering (nkeji 75 maka ntinye otu, 90 nkeji maka ihe eji eme akwa) nwere ike nweta n'ihi na ịchọghị / chọọ ka ndị a bụrụ translucent, ịchọrọ ike ma na-aga akwa oyi akwa maka esthetics. Mana ikwesighi iche echiche banyere ịme mmemme ngwa ngwa (nkeji 75 / 90minutes) maka okpueze zuru oke na akwa mmiri belụsọ na onye nrụpụta ahụ nyere gị ezigbo akụkụ (enwere ụfọdụ na-arụ ọrụ, dabere na ihe ahụ, mana ha dị ihe dịka elekere 3). na awa 4.5 n’otu n’otu.
MGBE ọ bụla na-eme usoro ihe omume (awa 7.5 ma ọ bụ karịa, dabere na zirconia na ọkụ) mgbe ị na-eme ogologo àkwà mmiri, Ọnọdụ niile na-4, ma ọ bụ na-eji mmiri agba agba.
PREV: Vsmile 3D Prism Zirconia Block Cases A3 ringkesa
OSOTE : Ọ bụchaghị Dental Zirconia Ceramic Disks bụ otu na nhazi China Manufacturing? Kedu ihe na-eme ka ngwaahịa gị dị iche?
Vsmile Milling Burs Wieland ® Zenorech at Kwekọrọ n'Ozizi
Vsmile Milling Burs Iems-icores Coritec Onye 150i 250i 350i 450i ® at Kwekọrọ n'Ozizi